Umhla My Pet » 6 Summer Umhla Ideas
ukubuyekezwa: Nov. 23 2020 | 2 min ukufunda
Yenza olu sizzle ehlotyeni – encopho yethu 6 izimvo Umhla kweli xesha!
Phumani apho ubone zonke ezo ndawo ubuzifihla ukuba intsingiselo ukubona. Akaphelelanga nje uphando kubonakele ukuhayikha iphucuke impilo yakho, kwakhona ivumela ixesha nendawo ukufumana ngokwenene ukwazi umhla wakho. Umdla ngakumbi indawo, le mthulise ngaphantsi kunzi- uya kuba – njengoko uza kusoloko kukho ukuthetha!
2. Betha ejimini kunye
Enoba yempambano fitness okanye ukuqala nje ngaphandle, ukuya umthambo usoloko mnandi kunye gym-buddy. Wena kunye nomhla wakho inokufana omnye nomnye trainer lobuqu, nokudala kweminquba yakho zokuqala ezimbini. Ntombikayise indlela egqibeleleyo ikukukhuthaza ukhuphiswano obuphilileyo phakathi kwakho.
3. Yiya sisiganeko zemidlalo zengingqi
Yiya umdlalo basekuhlaleni – kunye. Ivuyisane owayedlala yakho eg iminwe amagwebu. Ukuziva nime zasemse- isihlwele – kunzima ukuba wonwabe xa esenza yomtshangatshangiso! Ukuba uziva okhaliphileyo, ungasoloko zama uze ufumane umyalezo osuka kwi iJumbotron.
4. Campout ezimbini
Yenza inkoliso yabo ngokuhlwa zasehlotyeni. Kukho cheap, ukonwaba (kwaye uthando ngokupheleleyo) Umhla elinde kunene eyadini yakho. Wayeyimisele intente, uze ube uthando snuggling umhla ebusuku phantsi kwezulu ehlotyeni esineenkwenkwezi!
5. zoo Umhla
Uhambo ukuya ezu na qiniseka ukuba abakhuphe itakane kuni lo mhla ingcamango yokuyila! Kunye nezilwanyana ezininzi kangaka ukubona, uyakwazi azitshangatshangise sala na mthulise kunzi-. Qhubeleka, bonisa umhla wakho indlela WILD ngazo wena!
6. Berry ukuchola
Ihlobo lixesha egqibeleleyo ukufumana phandle kwaye chola namaqunube zakho, kwaye yenza umhla ingcamango entle ezonwabisayo ezizodwa kakhulu. Emva koko kuza ekhaya koko uzicime ezo amaqunube ibe izimuncumuncu izimuncumuncu elithozamisayo.
Indlela uKiss kwi 5 Amanyathelo Easy
7 Sex izibakala kukubasela Ingqondo
12 Tips For Singles ngempumelelo